I-powdered Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Abavelisi - iFocoker
I-Lorcaserin hydrochloride powder i-serotonin i-2C (i-5-HT2C) i-agonist ye-receptor kunye nemithi elawulwa ngomlomo ekhuthaza ....
Amandla: 1380kg / inyanga
I-powder Lorinerin HCL powder (846589-98-8) ividiyo
I-powdered Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Lorcaserin Hydrochloride powder
Igama leKhemikhali I-rough Lorcaserin HCL powder, iLorcaserin
uhlobo Numama BELVIQ
Iqela leziyobisi I-5-HT2C i-receptor inhibitor
Inani leCAS 846589-98-8
I molecular Fi-ormula C11H15Cl2N
I molecular WSibhozo 232.15
IMasaisotopic Mass 231.058154899
I-Biological Half-Life Isiqingatha-ubomi se-lorcaserin malunga neeyure ze-11. I-powcaserin powder ipheliswa ngokuyinhloko kumchamo (i-92%) kunye nakwinkomo (2.2%)
Umzimba Ubuncwane bamanzi: 0.0709 mg / mL
yoGcino Tukushisa -20 ° C.
Aukuguquka I-Serotonin 2C (HT2C) i-agonist ye-receptor yokulahleka kwesisindo.Ikhetha ukusetyenziswa kokutya kwaye ikhuthaze i-satiety centrally
I-rough Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Inkcazo
I-Lorcaserin hydrochloride powder i-hydrochloride efunyenwe yi-lorcaserin powder enexabiso elifanayo le-hydrochloric acid. Isetyenziswe njengesicatshulwa sokulwa nokukhuluphala. I-Lorcaserin hydrochloride yi-5HT2c i-agonist i-receptor i-agonist ibonakaliswe ukusetyenziswa kubantu abadala abane-BMI ≥30, okanye abo abane-BMI ≥27 kwaye ubuncinane ubunzima obunxulumene nesisindo ezinjenge-hypertension, uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela okanye i-dyslipidemia.I-powdererin Hydrochloride powder isebenza ngokunciphisa ukutya iyakuchukumisa ukuvakalelwa, kwaye kucatshangelwa ukuba igwebe ukukhawuleza kwezifo zentliziyo ye-valvular ezichaphazelekayo kunye nokusebenza kwe-5-HT2B receptors, indawo yengqondo eyaziwayo ukuba indima enkulu ekulawuleni indlala nokutya. Ngokusebenzisa le milambo, i-Lorcaserin hydrochloride powder inganciphisa ukusetyenziswa kokutya ngokunciphisa ukutya kunye nokwenza umntu azive epheleleyo nangemva kokutya ukutya okungaphantsi kunokuqhelekileyo. ivunyiwe namhlanje yi-FDA kwisigqibo esinqumlekileyo emva kweminyaka eyi-2 yokuhlolisisa.
I-Lorcaserin hydrochloride powder ibonakaliswe ngokukodwa njengendlela yokunciphisa ukutya okunokunciphisa-khalori kunye nokunyuka komzimba okwenziwe ukulawula ukunyuka kwamayeza kubantu abadala (i-BMI ye-30 kg / m2 okanye ngaphezulu) kunye nabantu abadala kakhulu (i-BMI ye-27 kg / m2 okanye ngaphezulu) ubuncinane ubunzima obunxulumene nesisindo.
I-Lorcaserin hydrochloride powder isetyenziselwa kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala. Ngamanye amaxesha kusetyenziswa ukuphatha ukukhuluphala okunokuthi kuhlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Lorcaserin hydrochloride ayiyi kunyanga nayiphi na imeko yezempilo (njengentliziyo yesifo, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi). Qhubeka uthatha nayiphi na enye imichiza ugqirha wakho oye wachaza ukuphatha le miqathango.
Nangona indlela echanekileyo ingaziwa, kukholelwa ukuba kuququzelele ukukhetha okukhethayo kwe-5-HT2C i-receptors kwi-anorexigenic pro-opiomelanocortin neurons kwi-nucleus ene-hypothalamus. Oku kuphumela ekunciphiseni ukutya nokutya ngokunciphisa ukukhululwa kwe-alpha-melanocortin i-hormone ekhuthaza, eyenzeka kwi-melanocortin-i-4 receptors.
I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza ngokulawula isondlo - ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ye-serotonin, i-neurotransmitter eyenza ivakalelo lokuxhamla kunye nokwaneliseka. Ukungena kokutya kulawulwa yiziko elixhasayo, elisekhompyutheni ye-hypothalamus kunye nendlala ekhoyo kwi hypothalamus yangaphambili. Iziphumo ezahlukeneyo ezivela kumaziko aphezulu kunye namaphepheni ezinyantyambo ziguqula i-nucleus, apho kukho iintlobo ezimbini ze-neurons ezilawula ukutya okukhoyo. Okokuqala, iqela lokuvuselela ukutya lokuvelisa iprotheni ehlobene ne-agouti kunye neuropeptide Y; kwaye okwesibini, iqela lokutya lokutya eliqukethe i-cocaine kunye ne-amphetamine lilawulwa ngokubhaliweyo (IPART) kunye ne-pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. I-POMC iqulethe i-5-HT i-2C receptors, xa isebenze ikhupha i-hormone ye-alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH) .Iimpawu ze-inuritory ne-stimulatory neurons zenza iiprojekmaular projekticular nucleus kwi-hypothalamus. I-nucleus ehambayo iqukethe i-melanocyte i-4 receptors (MC4R) evimbela ukondla kwimiqathango yokwelapha i-lorcaserin hydrochloride powder isebenza njenge-5-HT 2C agonist kwi-POMC neurons, leyo eyenza ikhuphe i-alfa MSH. I-alfa eqhubekayo i-MSH yenza i-MC4R kwi-nucleus yeparagrase kwi-hypothalamus, ekhokelela ekunciphiseni ukutya. Kwii-supratherapeutic doses, i-lorcaserin hydrochlorider yenza kwakhona kwi-5-HT 2B kunye ne-5-HT 2A receptors.
benefits I-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
I-Lorcaserin HCL powder yi-5-HT2C i-receptor agonist ecinga ukuba iyancipha ukunciphisa ukutya ngokusebenzisa inkqubo yePOMC ephakathi. Inzuzo yefowuni yeLorcaserin HCL:
I-Lorcaserin HCL powder isetyenziselwa kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala.
Ngesinye isikhathi i-Lorcaserin i-HCL powder isetyenziselwa ukunyanyisa ukukhuluphala okunokuthi kunxulumene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Lorcaserin HCL powder ayiyi kunyanga nayiphi na imeko yezempilo (njengentliziyo yesifo, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi).
Ukuphakanyiswa kwe-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Isisombululo
I-Lorcaserin i-HCL ipowder ifika kwifom yefribhethi kwaye ithathwa ngama1-2 ngamaxesha ngamaxesha, ngaphandle kokutya. I-Lorcaserin kufuneka isetyenziswe kunye nokunciphisa i-calorie yokutya kunye nesicwangciso sokusebenzisa.
I-dose ephakanyisiweyo ye-lorcaserin hcl powder ngu-10 mg olawulwa ngomlomo kabini ngosuku. I-Lorcaserin ingathathwa ngaphandle kokutya. I-Lorcaserin hcl kufuneka ishiywe kwizigulane ezingaphumeleli ukufezekisa ubuncinane i-5% yokulahleka kwesisindo ngeveki ye-12 ekubeni ezi zigulane azisoloko zifumana ukulahlekelwa kwesisindo esinokuthi zenze unyango oluqhubekayo.
Imiphumela I-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
I-Lorcaserin i-Hcl powder isetyenziselwa ukunyanga ukulawulwa kobunzima obungapheliyo kubantu abadala abane-index ye-mass mass (BMI) ye-30 okanye ngaphezulu (obomkhulu) njengongezwa kwindlela yokunciphisa i-calorie kunye nokuzivocavoca. Kuvunyiwe ukuba kusetyenziswe abantu abadala abane-BMI ye-27 okanye ngaphezulu (obuninzi ngaphezu komzimba) kwaye obuncinane ubunzima obunxulumene nesisindo ezifana nokunyuka kwegazi (i-blood pressure), okanye i-cholesterol ephezulu (i-dyslipidemia). Nangona kunjalo, nayo inokuba nemiphumo emibi. Nje ngezantsi:
▲ Tiziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo:
- I-hepoglycemia (ushukela wegazi ophantsi).
▲ Ezinye iziqhelo ezingekho phantsi kodwa ezibi kakhulu ezinxulumene ne-lorcaserin ziquka:
-Qala iingxaki zeviniki,
-Changisisa kwingqalelo okanye kwimemori,
Ukuxhatshazwa okanye iingcinga zokuzibulala,
-Ukuhla kwe-cell cells count, kunye
- Ukwanda kwehomoni, iprolactin.